झाडापखालाले मान्छे मरिसकेपछि बल्ल खोप ल्याउन सरकारी छलफल सुरू – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, १५ वैशाख, २०७६ । बालबालिकामा हुने झाडापखालाको प्रमुख कारण रोटा भाइरसलाई मानिन्छ । यही मंसिरदेखि रोटा भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउने सरकारको योजना थियो । नेपालमा झाडापखालाकाे समस्या वर्षेनी देखिने भएकाले याे खोप महत्वपूर्ण छ ।
ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन गाभीको सहयोगमा सरकारले ३ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख भाइल खरिद गर्न लागेको थियो । तर, खोपका लागि सम्झौता गरेको बेलायतको जीएसके कम्पनीले खोप पठाएन र, आगामी एक वर्षसम्म खोप पठाउन नसक्ने सन्देश पठायो । जसका कारण खोप प्रयोगमा ल्याउने सरकारी योजना अन्तिम समयमा राेकिएकाे परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतकाे बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए । उनी भन्छन्, ”गाभीकाे सहयाेगमा हामीले राेटा भाइरस विरुद्धकाे खाेप प्रयाेगमा ल्याउने तयारी गरेका थियाै तर सम्झैता अनुसार खाेप आएन त्यसैले याे कार्यक्रम राेकिएकाे छ ।”
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने झाडापखालाकाे प्रमुख कारण राेटा भाइरस हाे । एक वर्षमुनिका ६ लाख ३० हजार बालबालिकालाई याे खोप लगाउने सरकारको योजना थियो ।
झाडापखालाले कैयौं बालबालिका कुपोषणको शिकार हुने गरेका छन् । केहीको मृत्युको कारण पनि झाडापखाला नै बन्ने गरेको छ । झाडापखाला कारण गतवर्ष ३३ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाए भने साढे २ लाख बालबालिका झाडापखालाबाट ग्रसित भए । तीमध्ये १५ सयभन्दा बढीमा कडा जलवियोजन देखिएको सरकारी तथ्यांक छ ।
रोटा भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा आए झाडापखालाबाट बालबालिकालाई बचाउन सकिने सरुवा राेग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनकाे भनाइ छ । उनी भन्छन्, ”नेपालमा देखिने झाडापखाला धेरैजसाे राेटा भाइरसका कारण हुने गर्छ । त्यसैले याे खाेप हाम्राे लागि महत्वपूर्ण छ ।”
केही समय ढिला हुने भए पनि यसको विकल्प बारे छलफल भइरहेको सरकारी भनाइ छ । बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा प्रमुख डा. गौतमले भने ”यसरबारे हामीले छलफल गरिरहेका छाै । छिट्टै निर्णय गर्छाै ।” बाल मृत्युदरको प्रमुख कारण मानिएको झाडापखाला नियन्त्रणका लागि सरकारले लिने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
Tagged खोप झाडापखाला सरकारी छलफल
Tags: खोप, झाडापखाला, सरकारी छलफल